Hangzhou Savgood waxaa la asaasay May, 2013. Waxaa naga go'an inaan bixinno xalka xirfadlaha ah ee CCTV - Hangzhou Savgood Technology Co., Ltd.
Savgood Technology - Soo-saare Modules Camera Zoom.
Hangzhou Savgood waxaa la asaasay May, 2013.Waxaa naga go'an inaan bixino xalka CCTV ee xirfada leh.
Sannadihii ugu horreeyay, waxaanu kaliya qaybinaynay badeecadaha nooca Hikvision iyo Dahua, waxaanu u dhoofinay suuqyada dibadda, Waqooyiga Ameerika, Yurub, Aisa iyo Afrika.Waxaan nahay mid ka mid ah 10-ka ugu sarreeya ee alaab-qeybiyeyaal Dahab ah oo ku jira Qaybta Amniga ee Alibaba.com.
Laga bilaabo 2016, waxaan helnay most of Long Range Zoom xalalka waxay isticmaalayaan kamarada caadiga ah ee sanduuqa iyo muraayada matoorka, taas oo ah mid aad qaali u ah, aan deganayn iyo waxtarka hoose ee auto diiradda.
Si loo xalliyo arrimaha hadda jira ee xalka kamaradaha dheer ee Range Zoom, oo ku salaysan SONY caan ah, tayada sawirka sare leh iyo ultra starlight Exmor/Exmor R CMOS Sensor, Kooxda Savgood oo wata alaab-qeybiyeyaal ayaa bilaabay inay naqshadeeyaan oo horumariyaan noocyo badan oo ah Modules Camera Zoom, oo diiradda saaraya Ultra LONG Qaybaha kamaradaha RANGE ZOOMQaybo badan ayaa si guul leh loo sii daayay, tusaale ahaan, 4Mp 88x Zoom (10.5 ~ 920mm), 2Mp 80x Zoom (15 ~ 1200mm), 2Mp/4K/8Mp 50x Zoom (6 ~ 300mm), Network & Digital version, iyo sidoo kale zoom Iftiiminta laysarka infrared si uu ugu shaqeeyo kamarada maalinta.
Waxay ku taageeri karaan si dhakhso ah & sax ah u gaar ah u gaar ah Auto Focus algorithm, Defog iyo IVS (Intelligent Video Surveillance) hawlaha, Onvif borotokoolka, HTTP API ee nidaamka 3rd nidaamka dhexgalka.Iyo modulekayaga iftiinka laysarka infrared-ka waa nooc la habeeyay oo leh firmware zoom synchronous.
Sidoo kale, hadda xalka kamaradaha kulaylka waa analog hadda, haddii loo baahdo xallinta shabakadda, waxay u baahan tahay server-yada fiidiyoowga ah ee dhijitaalka ah si loogu beddelo fiidiyoowga anglog ee Shabakadda, taas oo qiimaheedu sarreeyo, fiidiyoowguna waa ka sii daraa, xakameyntu waa dib u dhac.Kooxda Savgood oo ay la socdaan alaab-qeybiyeyaasheenna waxay sidoo kale naqshadeeyaan oo horumariyaan modules-yada IP-yada ee kamaradaha kuleylka dhijitaalka ah, waxaan haynaa kamarad kuleyl wax-soo-saarka Ethernet, oo leh lens go'an iyo lens zoom oo sii socda, sidoo kale dareeme badan iyo moduleka kamarad laba-spectrum.
Waxaan u samaynay xoogaa isdhexgal ah kamarada qubbada PTZ, kamarada vechile, kamarada gimal ee drone-ka, kamarada PTZ ee culus, waxaanan wadnay qorshe aan sii deyno kamarada SWIR mustaqbalka dhow, oo leh lens zoom autofocus.
Hadda dhammaan modules-ka kamaradaha zoom-ka iyo qalabka kamaradaha kulaylka waxaa laga iibiyaa waddamo badan oo dibadda ah, Maraykanka, Kanada, Ingiriiska, Jarmalka, Israa'iil, Turkiga, Hindiya, Kuuriyada Koonfureed iwm. qalabka, qalabka warshadaha, qalabka Robot iwm.
Oo ku saleysan modules camera zoom muuqda noo gaar ah iyo modules camera kulaylka, waxaan sidoo kale isku daray qaar ka mid ah alaabta tartanka, PTZ Cameras, Drone Gimbal cameras iwm. Waxaan sidoo kale samayn kartaa OEM & adeegga ODM ku salaysan shuruudahaaga.